တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဟန်နာယူရီ - Cele Platform
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဟန်နာယူရီ
July 13, 2019 Kyaw Kyaw Celebrities 0
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. လတ်တလောမှာဆိုရင် ပရိတ်သတ်ကြားမှာအရမ်းရေပန်းစားပြီး တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကိုခံနေရတဲ့မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် မလေး ဟန်နာယူရီကို ပရိတ်သတ်ကြီးတွေလည်းသိမှာပါနော်။ အားလုံးရဲ့အချစ်တော်လေးလည်းဖြစ်သလို အရုပ်မလေးနဲ့ တူတဲ့သူမရဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ကိုရီးယားမလေးလို အရမ်းကိုလှပတဲ့အသားရေလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေအချစ်ပိုနေခဲ့ရတာပါနော်။
အနုပညာနယ်ပယ်လေးထဲမှာလည်း သူမဟာ အခြေအတော်လေးကျပြီး နာမည်လေးလည်းရလာကာ စီနီယာသမားတွေရဲ့ နေရာပေးခြင်းကိုလည်းခံနေခဲ့ရပါတယ်နော်။ မိတ်ကပ်ပိုင်းမှာလည်း အရမ်းကိုထူးချွန်တဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်လေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြု အားပေးခြင်းကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်နော်။
သူမဟာ ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အမြဲတမ်းလိုလို သူမရဲ့အလှပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးနေကျလည်းဖြစ်ပြီးတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း ကြည့်မိတိုင်းကြွေသွားရလောက်အောင်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လှလှလေးတွေကို တင်ပေးထားတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်နော်။ ကိုရီးယားသူလေးလို့တောင်ထင်မှတ်မှား ရလောက်အောင်ကို အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်း လွန်းနေတာကြောင့် ပုရိသပရိတ်သတ်တွေတင်သာမက မိန်းကလေး ပရိတ်သတ်တွေကပါ အချစ်တွေပိုပြီး နှလုံးသားနဲ့အားပေးခြင်းကိုခံနေရပါတယ်နော်။
ကဲ… ချစ်ဖို့လည်းကောင်းပြီး စိတ်ထားလည်း ဖြူစင်တဲ့ ပုရိသပရိတ်သတ်တွေရဲ့အသည်းစွဲ နှုတ်ခမ်းနီမလေး ဟန်နာယူရီရဲ့ အကြွေတစ်လိုင်းပုံရိပ်လှလှလေးတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Myanmarload
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. လတျတလောမှာဆိုရငျ ပရိတျသတျကွားမှာအရမျးရပေနျးစားပွီး တဈခဲနကျအားပေးခွငျးကိုခံနရေတဲ့မျောဒယျ သရုပျဆောငျ မလေး ဟနျနာယူရီကို ပရိတျသတျကွီးတှလေညျးသိမှာပါနျော။ အားလုံးရဲ့အခဈြတျောလေးလညျးဖွဈသလို အရုပျမလေးနဲ့ တူတဲ့သူမရဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့မကျြနှာလေးနဲ့ ကိုရီးယားမလေးလို အရမျးကိုလှပတဲ့အသားရလေေးကိုပိုငျဆိုငျထားသူလေးဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိတျသတျတှအေခဈြပိုနခေဲ့ရတာပါနျော။
အနုပညာနယျပယျလေးထဲမှာလညျး သူမဟာ အခွအေတျောလေးကပြွီး နာမညျလေးလညျးရလာကာ စီနီယာသမားတှရေဲ့ နရောပေးခွငျးကိုလညျးခံနခေဲ့ရပါတယျနျော။ မိတျကပျပိုငျးမှာလညျး အရမျးကိုထူးခြှနျတဲ့ မိတျကပျပညာရှငျလေးတဈယောကျလညျးဖွဈတာကွောငျ့ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အသိအမှတျပွု အားပေးခွငျးကိုခံနခေဲ့ရပါတယျနျော။
သူမဟာ ခဈြပရိတျသတျတှအေတှကျ အမွဲတမျးလိုလို သူမရဲ့အလှပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝပေေးနကေလြညျးဖွဈပွီးတော့ အခုတဈခါမှာလညျး ကွညျ့မိတိုငျးကွှသှေားရလောကျအောငျကို ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးနတေဲ့ ပုံရိပျလှလှလေးတှကေို တငျပေးထားတာတှရေ့ပွနျပါတယျနျော။ ကိုရီးယားသူလေးလို့တောငျထငျမှတျမှား ရလောကျအောငျကို အရမျးခဈြဖို့ကောငျး လှနျးနတောကွောငျ့ ပုရိသပရိတျသတျတှတေငျသာမက မိနျးကလေး ပရိတျသတျတှကေပါ အခဈြတှပေိုပွီး နှလုံးသားနဲ့အားပေးခွငျးကိုခံနရေပါတယျနျော။ကဲ… ခဈြဖို့လညျးကောငျးပွီး စိတျထားလညျး ဖွူစငျတဲ့ ပုရိသပရိတျသတျတှရေဲ့အသညျးစှဲ နှုတျခမျးနီမလေး ဟနျနာယူရီရဲ့ အကွှတေဈလိုငျးပုံရိပျလှလှလေးတှကေို ခဈြပရိတျသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။Myanmarload
တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရဖို့ ဆုတောင်းနေတဲ့ နေခြည်ရွှန်းလက်
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေ ထောက်ပြပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူး